माल्टामा आकर्षक रोजगारीको अवसर, तलब २ लाख ८२ हजारसम्म, सेवा शूल्क ३० हजार मात्रै ! – Enepali Samchar
January 19, 2021 adminLeaveaComment on माल्टामा आकर्षक रोजगारीको अवसर, तलब २ लाख ८२ हजारसम्म, सेवा शूल्क ३० हजार मात्रै !
वैदेशिक रोजगारीको लागि माल्टाबाट नेपाली श्रमिकको लागि माग आएको छ । माल्टाको इस्टन कन्सल्टेन्सी सर्भिस कम्पनीले विभिन्न १२ पदका लागि ५८ जना नेपाली श्रमिकको माग गरेको छ ।
खाने बस्ने सुविधा सहित काम अनुसार न्यूनतम मासिक तलब १ लाख ३४ हजार देखि अधिकतम २ लाख ८२ हजार सम्म तोकिएको छ । ओभर टाईम सुविधा, वार्षिक बिदा कम्पनीको नियमानुसार हुने जनाइको छ । ***भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला***
सम्बन्धित काममा ३ वर्षको अनुभव हुनेले डिमाण्डमा आवेदन दिन सक्ने म्यानपावरले जनाएको छ । स्वदेशमा गरिने मेडिकलको शुल्क, म्यादी जीवन बीमाको प्रिमियम, अभिमुखीकरण शुल्क र भिसा स्ट्याम्पीङ्ग शुल्क वापतको रकम कामदार आँफैले व्यहोर्नुपर्ने म्यानपावरले जनाएको छ । विदेशमा गर्ने मेडिकलको खर्च, भिसा शुल्क, हवाई टिकट, रोजगारमा हुने बीमा बापतको प्रिमियम शुल्क सबै रोजगारदाता कम्पनीले व्यहोर्ने जनाइएको छ ।
डिमाण्डमा माग गरिएका पदहरुको लागि मंसिर १३, २४ र २५ गते म्यानपावर कार्यालय काठमाडौमा हुनेछ ।
वैदेशिक रोजगार विभागबाट गराइएको जानकारी यस्तो छ
विद्युत प्राधिकरणले दैनिक सात घन्टाको लोडसेडिङ तालिका निकाल्यो(तालिका सहित)
प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुन्छ भन्ने भ्रममा नपरौँः प्रधानमन्त्री ओली
कुकुरसँग खेल्दा बाइडेन घाइते ट्रम्पबाट स्वास्थ्यलाभको कामना
अब शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ५ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख सम्म ऋण पाइने (यसरी लिनुहोस्)
खिमलालजी हाम्रो उमेदवार हो भन्ने कुरा घामजस्तै छर्लङ्ग छ बादल को हो हामी चिन्दैनौ : एमाले जनप्रतिनिधि